Guulaalii - GeessituuwwanFili
Yeroo faayilii kornyoowwan qabate bantu, kornyoowwan haaromsuuf kakaata. Bakka faayiloon kornyatan itti kuufaman irratti hundaa'udhaan dalagni haaromsuu xumuuruudhaaf daqiiqaawwan hedduu itti fudhachuu danda'a.
Faayilii kornyoowwan DDEqabate yoo feetu akka kornyoowwan haaromsituu si'i kakaasa. Yoo waliindhaa DDE kaadhimaa hundeessuu hin barbaadnee haaromsa.
Kornyoo tarree keessaa Lama-cuqaasii qaaqa faayilii bakka wanta biroo tarree kanaaf filuu dandeessuu.
Yeroo faayilii URL tiin gongee dhaamsaa faayilii foddaalee keessaa bantu, foddaaleen garagalcha faayilii isa dhiyoo, kan kuftalee Internet Explorer keessaa banu.
Xurree faayilii maddaatti tarreessa.
Fayyadama(yoo beekame) kan faayilii madda dhuma olkaa'u tarreessa.
Akaakuu faayilii kanneen akka caatowaa, faayilii madda tarreessa.
Odeeffannoo dabalataa waa'ee faayilii maddaa tarreessa.
Ofumaan qabeentoota tarree yeroo faayilii bantuu haaromsa. Jijjiiramooni kamuu faayilii madda keessatti raawwataman kuunneen ittaansuudhaan faayilii kornyoo qabate keessatti agarsifamera. Faayilootni caatowwan kornyate hujeekaan qofa haarmfamuu danda'aa. Dirqalii kun faayilii caatowwaa kornyoo.
Dirqalli Ofumaa geessitoota DDE qofaaf jiraata. Qabeentoota faayilii keessaa gargalchuun fi Gulaali - Maxxansa addaa filattee maxxansuun, fi itti aansuun sanduuqa Geessituu filachuun geessituu DDE saaguu danddeessa. DDE'n akka sirna geessituu barruu irratti hundaa'e ta'uusaatti, kurnyeewwan agarsiifaman qofti gara wardii galteetti gargalchamu.
Yeroo qabduu Haroomsi cuqaastu, geessituu qofa haaroomsa.
Baay'een faayilii koronyate ol kaa'aman dhiyoon galmee ammee irratti akka mul'atan geessituu filame haaroomsa.
Geessituu filameef faayilii maddaa jijjiiri.
Kornyoo gudduu faayiilii maddaa fi galmee ammee jiru qurxa. Qabeentonni dhihoo haaromfaman kan faayilii maddaa galmee ammee keessa turaniiru.
Title is: Kornyoowwan Gulaali